Greengywatt: ahitana ny vokatra rehetra mandeha amin’ny masoandro | NewsMada
Greengywatt: ahitana ny vokatra rehetra mandeha amin’ny masoandro
11 taona izao ny niorenan’ny tranombarotra Tanatech, mivarotra ny vokatra Greengywatt, etsy Behoririka, ampitan’ny magazay Cosmos vaovao. Mampiavaka azy ny fivarotana ireo vokatra sy fitaovana ary kojakoja rehetra mandeha amin’ny herin’ny masoandro. Karazana fitaovana maro no hita ao, toy ny takelaka (panneaux solaires) manomboka amin’ny 5W hatramin’ny 380 W, ny mandrindra ny herinaratra (régulateurs) 5A -100 A, ny manova ny tanjaky ny herinaratra (convertisseurs) 200 VA-200 KVA, ny bateria mampandeha ny fitaovana avy amin’ny masoandro sy ny fiarakodia (4 AH-1.500 AH), sns. Maro koa ireo marika vatsian’ny orinasa izay azo antoka sady avo lenta, misy ireo marika avy any Eoropa toy ny SMA sy ny Fronius ary ireo zay avy any Sina toy ny Greengywatt, ny Epever ary ny Growatt zay fanta-daza eran-tany.
Misy ihany koa ireo fitaovana hafa mandeha amin’ny herin’ny masoandro, toy ny famanana rano (chauffe à eau), ny vata fampangatsiahana (réfrigerateur sy congélateur), ny fisintonan-drano (pompe à eau) ary ny kojakoja ao an-tokantrano.
Nilaza ny tale teknikan’ny Tanatech Greengywatt, Rakotoarisoa Mparany, fa mora kokoa ho an’ny Malagasy ny mampiasa ireo fitaovana famoronana angovo azo avy amin’ny masoandro , satria mifanandrify amin’ny toetrandro ny fahamaivanana ny fametrahana azy , ny fisiany manomboka amin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe indrindra ary ny fiainana andavanandro sy ny zava-misy eto amintsika, an-tanàn-dehibe, ambanivohitra, sns.
Tsy lafo vidy ireo fitaovana satria ezahina hifanandrify amin’ny fahefa-mividin’ny sokajin’olona rehetra. Afaka mamaha ny olan’ny delestazy, mahazo ny tokantrano malagasy ankehitriny koa. Manoro hevitra ireo mpanjifany sy manohana ara-teknika ny ekipa Greengywatt, ary miantoka ny fitaovany mandritra ny fotoana voafetra.
Maro koa ny fiaraha-miasa amin’ireo rafitra iraisam-pirenena sy eto Madagasikara nandritra izay taona maro nodiaviny izay ka nahazoana traikefa betsaka.